Ciyaaryahan Caan ah oo lagu xiray dalka Paraguay – Banaadir Times
Ciyaaryahan Caan ah oo lagu xiray dalka Paraguay
By banaadir 7th March 2020 171
Xiddiggii hore ee kubadda cagta ee dalka Brazil Ronaldinho iyo walaalkiis ayaa Jimicihii lagu xiray dalka Paraguay iyagoo loo haysto inay baasaboor been abuur ah ku safrayeen oo ay doonayeen inay dalkaasi ku galaan.
Dacwad-oogayaasha ayaa sheegay in isaga iyo walaalkiis la siiyay dukumentiyo been abuur ah markii ay Arbacadii soo caga dhigteen caasimadda dalkaas ee Asuncion.
Labadooda ayaa laga kaxeeyay garoonka si su`aalo loo weydiiyo, iyadoo hoteelkoodana ay baaritaan ugu dhaqaaqeen booliiska.
Ronaldinho iyo walaalkiis ayaa beeniyay inay wax dembi ah galeen iyagoo sheegay in ay u maleeyeen in baasaboorrada ay ahaayeen kuwo lagu sharfayo.
Lahaanshaha sawirkaFISCALIA PARAGUAY, ON FACEBOOK
Bishii July sanadkii 2019, cayaartoyga ayaa la sheegay in laga qaaday baasaboorradiisa Brazil Spain sababo la xiriira canshuuro uusan bixin iyo inuu si sharci darro ah goob lagu nasto uga dhisayay Brazil.
“Waan tixgelinayaa caannimadiisa dhanka kubadda cagta balse waain sidoo kae la xushmeeyaa sharciga. Cedda aad tahayba, sharciga wuu ku qabanayaa”, ayuu Mr Acevedo u sheegay warbaahinta.
Ninkan 39 sano jirka ah ayaa u safray Paraguay si uu halkaasi ugu soo bandhigo buug iyo olole ku saabsan carruurta saboolka ah.
Ronaldinho wuxuu sanadihii 2004 iyo 2005 ahaa cayaartoyga dunida ugu wanaagsan. Wuxuu sanadkii 2002 Brazil u qaaday Koobka Adduunka, isagoo ay ku wehliyeen cayaartoyda kale ee Ronaldo iyo Rivaldo.
Maalka uu haysto Ronaldinho waxaa lagu qiyaasaa £80-100m waxaana la sheegay in lagu ganaaxay ilaa £150,000 isagoo loo haystay qoraal uu soo dhigay barta Instagram.
Midowga Musharixiinta oo Shacabka Muqdisho u diray baaq ku saabsan banaanbaxa